Maxaa sababay iney is casisho Xoghayihii amniga gudaha Dalka Mareynkanka? – Walaal24 Newss
Madaxweynaha Mareynkanka Donald Trump, ayaa axaddii shalay ahayd shaaciyay iscasiladda Haweeneydan ahayd Xoghayihii amniga gudaha Maraykanka Kirstjen Nielsen,wuxuuna madaxweynaha hoosta ka xariiqay inuu sii xoojinayo siyaasadda arrimaha socdaalka ka dib markii ay soo ifa-baxeen murano dhanka xuduudaha la xiriira.
Xoghayihii amniga gudaha Maraykanka Kirstjen Nielsen oo mas’uul ka ahayd qorshaha muranka badan dhaliyay ee siyaasadda socdaalka ayaa xilkii iska casishay.
Kirstjen Nielsen oo ah Haweeneyda is-casishay ayaa ku tilmaamtay “Sharaf” in ay ka shaqaynaysay wasaaradda amniga gudaha, islamarkaana isbedel la taaban karo ay ku sameysay mudadii ay xilka heysay.
“Xoghayaha nabadgelyada waddanka Kirstjen Nielsen ayaa ka tegaya booskeeda, waxaanan jeclaan lahaa in aan uga mahadceliyo adeeggeeda”.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Kevin McAleenan, Wakiilka Ammaanka ee Mareykanka iyo Guddiga Ilaalinta Xuduudaha, uu noqon doono Ku Xigeenka Xoghayaha ee @DHSgov. Waxaan kalsooni ku qabaa in Kevin uu sameyn doono shaqo weyn!”
Waxa ay haweenaydan mas’uul ka ahayd hirgalinta qorshaha gidaarka iyo kan ka hortagista dadka soogalootiga ah, gaar ahaan in la kala sooco carruurta iyo waalidkooda muhaajiriinta ah.
Ma aysan sheegin wax sabab ah oo ay xilka u banaysay, balse waxa ay sheegtay in ay tahay waqtigii ugu haboonaa ee an xilka ka degto marka la barbardhigo kolkii ay maamulka ku biireysay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS oo shir guddoomiyay kulan looga arinsanayay xaqiijinta Amniga goobaha lagala wareegay Al-Shabaab
Wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay Xarunta Degmada Howl-wadaag
Sawiro: Guddoomiyaha G/Banaadir oo soo xiray barnaamijka Jadwalka iyo Qorshaha Dhismaha goleyaasha deegaanka
Kooxda Daacish oo soo saartay muuqaal lagu sheegay inuu yahay Hogamiyaha Sare ee Dacish